/ iimveliso / I-Fat Loss powder / Phaseolin umgubo
Akukho kalo SKU: 13401-40-6. Udidi: I-Fat Loss powder
Ifomula yeMolekyuli: C20H18O4
Ubunzima Ezinto: 322.358
Ngokwethiyori, amandla e-enzyme-ethintela amandla e-phaseolamin anciphisa inani leekhalori ezisekwe kwi-carbohydrate ezifunxwayo zaze zaguqulwa zaba ngamanqatha omzimba. Ayikwazi ukwahlula isitatshi iswekile elula, inkqubo yokwetyisa ikhupha isitatshi esetyetyiswe kancinci ngexesha lokuhamba kwamathumbu. Isifundo esenziwe kwiYunivesithi yaseCalifornia sachaza ukuba i-phaseolamin inqanda okanye ilibazise ukwetyisa isitatshi esintsonkothileyo, ngaloo ndlela kuncitshiswa ubunzima kunye nobungakanani besinqe sabathathi-nxaxheba abatyebe kakhulu. Nangona abanye abathintela amanqatha anje nge-orlistat (igama lorhwebo u-Alli) bavelisa iziphumo ezingathandekiyo zesisu ngenxa yomsebenzi wabo wokuthintela i-enzyme, uninzi lwezilingo zeklinikhi zibonakalise imeko ephantsi yesifo sorhudo kunye neentlungu zesisu phakathi kwabasebenzisi be-phaseolamin.
Ngenxa yokuba isicatshulwa esimhlophe seembotyi esithintelayo sithintela ukufunxwa kwee-carbohydrate kunye nokuguqulwa kwazo zibe siswekile elula, inokuthi inike unyango olunokubakho lweswekile kunye ne-hypoglycemia esebenzayo. UGqirha Jay Udani – umlawuli wezonyango woPhando lweMedicus kunye nombhali weYunivesithi yaseCalifornia ka-2007 yophando lwe-Phaseolin powder eluhlaza (CAS 13401-40-6) -ucebise ukuba le khompawundi ingathoba isalathiso sokutya okunesitatshi esinjengesonka esimhlophe . Ngokuphazamisa amandla omzimba ekufumaneni i-glucose kwezi zinto zokutya, i-Phaseolin powder inokuthintela i-spikes ngequbuliso kwiswekile yegazi kwaye kubangele iingxaki. Ukongeza, ukuxhaswa rhoqo kunokuthintela okanye kulibazise ukuqala kohlobo lweswekile yesi-2 kubantu abane-hypoglycemia esebenzayo (ngaphambi kweswekile). Nangona olu setyenziso lwethiyori lubonakala ngathi luyathembisa, khange luphandwe ngezilingo ezinkulu zeklinikhi.